Tirada Dadka Shiinaha Ugu DHintay Carono Virus oo Sii Korortay. – Shabakadda Amiirnuur
February 3, 2020 3:56 pm by admin Views: 162
Gudiga caafimaadka ee dalka Shiinaha, ayaa sheegay in ay diwaan galisay 56 qof oo cusub oo laga helay fayruska Axadii shalay, taas oo tirada dhimashada ka dhigeysa 361 xaaladood, halka tirada dadka cudurka uu soo ritay ay gaarayaan 17,205 qof.
Magaalada Shiinaha ee Wenzhou, waxay soo rogtay xayiraad dhaqdhaqaaqa dadka deggan si loo xakameeyo fayraska Corona. Bangiga dhexe ee Shiinaha wuxuu shaaca ka qaaday qoondeynta qiyaastii 170 bilyan oo doolar si loola dagaallamo fayraska.
Indonesia ayaa go’aansatay inay joojiso duullimaadyada tagaya iyo kuwa ka imaatinka Shiinaha wixii ka dambeeya Arbacada soo socota, mana jiro qof Shiinaha u dhashay oo loo oggolaan doono inuu soo galo Indonesia.
Dhinaca kale, Saraakiisha Faransiiska waxay sheegeen in diyaarad sidday in ka badan 250 qof oo soddon dal ka soo jeeda ay timid maalintii Axadda ee Faransiiska, kana timid magaalada Wuhan ee Shiinaha, isla markaana ay diyaaraddu ku degtay saldhig millatari oo ku yaal Istres (koonfurta Faransiiska).
Wasiirka Caafimaadka ee Faransiiska ayaa sheegay in astaamaha fayraska Corona uu kasoo shaac baxay in ka badan labaatan qof oo kamid ah 250-kii qof ee diyaaradda ku yimid.
Wasiirka Faransiiska wuxuu sheegay in 124 qof loo gudbin doono dalalkooda, 64 Faransiis ahna la karantiili doono.